Wararka Maanta: Isniin, Jan 13, 2020-Al-shabaab oo macallimiin ku laayay gobolka Gaarisa ee dalka Kenya
Al-shabaab waxay sidoo kale burburiyeen anteeno isgaarsiineed oo ay leedahay shirkadda Safricom intii uu socday weerarka.
Sida boolisku sheegay, dableydu waxay weerareen Xarunta Kheyraadka Kamuthe, halkaas oo ay ku dileen seddexda macallin.
Macallimiin dheddig ah iyo kalkaaliyeyaal caafimaad oo ka tirsan machadka ayaa la sheegay inay ka badbaadeen toogashada ka dib markii ay aqoonsadeen kooxda wax weerartay.
Dhanka kale, booliska ayaa durbadiiba gaaray, iyagoo halkaas ka wada baaritaanka kuwa weerarka soo qaaday.
Horantii bishaan, Al-shabab waxay weerareen xero militari oo ku taal Lamu, halkaas oo lagu dilay 3 Mareykan ah.